7 Ndụmọdụ maka Irè Digital Coupon Marketing | Martech Zone
Ndụmọdụ 7 maka Irè Digital Coupon Dị Irè
Monday, March 23, 2015 Douglas Karr
Ezigbo enyi Adam Small nwere ikpo okwu ederede ekwenti nke ahụ na-ahụ ọnụego mgbapụta dị ịtụnanya na ederede ederede SMS. Otu usoro ọ gwara m gbasara onye ahịa ahụ nyere ya weta enyi -enye ebe ị natara a free shake mgbe ị kpọtara enyi oruru. Ha ga-eziga ederede ahụ na ọkara awa tupu nri ehihie ma a ga-enwe ahịrị n'èzí. Ọ bụ nnukwu echiche n'ihi na ọ bụghị naanị na ị na-elekwasị anya na onye na-awụli elu na ego, ị na-enweta onye nchebe ọhụrụ nke na-anwale nri gị!
Agba, onye na-ebi akwụkwọ kaadị na-eduga na Canada, ewepụtala infographic a na-akpọ Kupọns dijitalụ na-anya ụgbọ ala na ahịa Omni-Channel na-ejegharị site na ojiji na ọnụ ọgụgụ metụtara na digital dere usoro azum. Ihe omuma ihe na-enye ndi a Ndụmọdụ 7 maka Irè Digital Coupon Dị Irè:
Iwekota na Email - Gbaa mbọ hụ na dijitalụ kupọn na-etinye na email nke ndị ahịa gị. Inweta adreesị ozi-e na-enye gị ohere ịmegharị ha oge niile na ọpụrụiche na mbelata ego!
Gụnye Mkpogharị Anya - Tinye akara ngosi gị ma ọ bụ foto nke ngwaahịa ndị nwere agba agba, agba agba na akwụkwọ edemede ga-akpali ndị ahịa.
Ndị na-eri ihe ezubere iche - Site n’iche banyere mba, ụlọ ọrụ achụmnta ego na-enwe ike iji ọnọdụ ndị ahịa iji nyefee Kupọns mgbe ha nọ nso!
Onye mmekorita ya na onye nkesa - Ọrụ kupọn nwere oke nkesa ohere iji gbasaa iru gị.
Jiri Izi ozi ederede - Mepụta mmemme maka ndị ahịa nke na-eme ka ọ dị ha ka ha bụ akụkụ nke ọgbakọ pụrụ iche ma nye ha onyinye pụrụ iche.
Gbaa ringkekọrịta - Tinyekọta bọtịnụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji nye ohere maka ịpị otu pịa ịkekọrịta na ntanetị mgbasa ozi.
Tụọ Nsonaazụ - Dịka nkwalite ọ bụla ruru ụbọchị mmebi ya, hụ ihe na-arụ ọrụ na ihe na-agaghị arụ ma bulie mkpọsa gị ọzọ.
Tags: couponcoupon ahịakupọn dijitalụdijitalụ coupon ahịaemail KupọnsKupọns akwụkwọ akụkọSMSsms Kupọnssms egoklọb ederedeederede ederede Kupọnsego ederede ederedeederede ederede na-enyeozi ederedevalpak
Gịnị Mere Ndị Mmadụ Ji Jụ Iso Branddị Gị?
Gee nti na iche ohere na Twitter na SocialCentiv